လြှပျစဈခရီးသညျတငျကား (E-Bus) တှေ ပွညျတှငျးဈေးကှကျမှာ ထုတျလုပျဖွနျ့ခြိနိုငျဖို့အတှကျ ရငျးနှီး မွှုပျနှံမှုနှငျ့ နိုငျငံခွားစီးပှားဆကျသှယျရေး ဝနျကွီးဌာန၊
ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးအောငျနိုငျဦးက SC Auto (Myanmar) Co., Ltdနဲ့ ဆှေးနှေးခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။…
မင်ျဂလာဒုံမွို့နယျ ရနျကုနျစကျမှုဇုနျ၌ ရာနှုနျးပွညျ့ နိုငျ ငံခွားရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုဖွငျ့ လုပျငနျးလုပျကိုငျဆော ငျရှကျနသေညျ့SC Auto သညျ စင်ျကာပူနိုငျငံတှငျ လြှပျစဈဘတျဈကားမြား ထုတျလုပျနိုငျရေးအတှကျ သုတသေနလုပျငနျးမြား ဆောငျရှကျလကျြရှိပွီး…
SC Auto သညျ SC NEUSTAR အမှတျတံဆိပျဥရောပ စံခြိနျစံညှနျးမီ ခရီးသညျတငျ ဘတျဈကားမြားတပျဆငျထုတျလုပျရောငျးခခြွငျးလုပျငနျးကို ဆောငျရှကျလကျြရှိရာ…
အဆိုပါ စကျရုံမှ တဈနှဈလြှငျဘတျဈကားစီးရေ ၆၀၀ အထိ CKD စနဈဖွငျ့ထုတျလုပျနိုငျပွီး ထုတျလုပျမှု၏ ၅၀ ရာခိုငျနှုနျးကို အာဆီယံနိုငျငံမြားသို့တငျပို့နိုငျရနျ ပွငျဆငျဆောငျရှကျလြှကျရှိသညျ့ ကုမ်ပဏီတဈခုဟုထုတျပွနျခကျြအရ သိရှိရပါတယျ။….
ဝနျကွီး ဦးအောငျနိုငျဦးက နိုဝငျဘာ ၂၂ ရကျနေ့ နလေ့ ယျက SC Auto ရဲ့ ဒါရိုကျတာအဖှဲ့နဲ့ ဗီဒီယိုကှနျဖရငျ့နဲ့ တှဆေုံ့ပွီး လြှပျစဈခရီးသညျတငျကားတှေ ပွညျတှငျးဈေးကှကျမှာ ထုတျလုပျဖွနျ့ခြိနိုငျရေးနဲ့
လို အပျတဲ့ ယာဉျပစ်စညျးတှေ တငျသှငျးရာမှာ အခကျအခဲမရှိအောငျ ဆောငျရှကျပေးမယျ့ အစီအစဉျတှေ ဆှေးနှေးခဲ့တာဖွဈတယျလို့သိရပါတယျ။…
ထုတျလုပျပွီးတဲ့ လူစီးဘတျဈယာဉျတှကေို ပွညျပကို တငျပို့မယျ့ အစီအစဉျတှနေဲ့ ပတျသ ကျလညျး ဆှေးနှေးခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။…
လျှပ်စစ်ခရီးသည်တင်ကား (E-Bus) တွေ ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိနိုင်ဖို့အတွက် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်နိုင်ဦးက SC Auto (Myanmar) Co., Ltdနဲ့ ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။…
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ရန်ကုန်စက်မှုဇုန်၌ ရာနှုန်းပြည့် နိုင် ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဆော င်ရွက်နေသည့်SC Auto သည် စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကားများ ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး…
SC Auto သည် SC NEUSTAR အမှတ်တံဆိပ်ဥရောပ စံချိန်စံညွှန်းမီ ခရီးသည်တင် ဘတ်စ်ကားများတပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ…
အဆိုပါ စက်ရုံမှ တစ်နှစ်လျှင်ဘတ်စ်ကားစီးရေ ၆၀၀ အထိ CKD စနစ်ဖြင့်ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး ထုတ်လုပ်မှု၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကို အာဆီယံနိုင်ငံများသို့တင်ပို့နိုင်ရန် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဟုထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရှိရပါတယ်။….
ဝန်ကြီး ဦးအောင်နိုင်ဦးက နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်နေ့ နေ့လ ယ်က SC Auto ရဲ့ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့နဲ့ ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်နဲ့ တွေ့ဆုံပြီး လျှပ်စစ်ခရီးသည်တင်ကားတွေ ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိနိုင်ရေးနဲ့
လို အပ်တဲ့ ယာဉ်ပစ္စည်းတွေ တင်သွင်းရာမှာ အခက်အခဲမရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးမယ့် အစီအစဉ်တွေ ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။…
ထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့ လူစီးဘတ်စ်ယာဉ်တွေကို ပြည်ပကို တင်ပို့မယ့် အစီအစဉ်တွေနဲ့ ပတ်သ က်လည်း ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။…